२०७५ भाद्र १५, शुक्रबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । शेर्पा समुदायमा एकले अर्काको आलोचना गर्ने र अस्तित्व नस्वीकार्ने परम्परा त पुरानै हो । तर, यतिवेला पेचिलो बन्दै गएको कतिपय राजनीतिक मुद्दाका विषयमा शेर्पा नेताहरुवीच आक्षेपहरु लगाउँदै मैदानमा समेत उत्रने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा मुद्दा छोडेको आरोप त कहिले मुद्दाहरु आफूहरुले उठाएको बिषयमा नेताहरुवीच टसल हुने गरेका छन् । यस्तै एक दृश्य बुधबार राजधानीमा शेर्पा पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा देखियो । संघको बार्षिक साधारणसभा, पत्रकारिता पुरस्कार वितरण र तालिममा सहभागिलाई प्रमण पत्र वितरण गर्ने हेतुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा आमन्त्रित थिए, प्रदेश नं. ३ का सांसद आङ देण्डी लामा शेर्पा र विशेष अतिथिको रुपमा आदिवासी अधिकार अभियान्त आङ काजी शेर्पा ।
पहिला बोल्ने पालो पाएका आङ काजी शेर्पा किसानको ‘वर्तमान मुलुकको लामो व्यख्या र वर्ण व्यवस्थाको आलोचना गर्दै संघीय राज्यमा शेर्पाहरुको स्थान बारे गम्भिर भएर सोच्न आग्रह गरे ।’ उनले बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बेँड भन्दै आफ्नो भनाई टुंग्याएँ । उनलेवीचमा यसो भने ‘अहिले हामी सुस्ताएका छौं । उता १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवान–किरातको कुरा बलियो तरिकाले उठिरहेको छ । त्यहाँ राई र लिम्बुहरु एक छन् । यता दुईमा मधेशमा सरकार नै चलाईरहेका छन् । त्यहाँ समस्या भएन । ३ नं. प्रदेशमा ताम्सालिङ–नेवा प्रदेश नामकरणको कुरा चर्को रुपमा उठेको छ । ४ नं. प्रदेशमा मगरत–तमुवानले राम्रै तहल्का मचाईरहेका छन् । बाँकी प्रदेशहरुमा पनि जातीय नामकरण र वर्चस्वको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न माग राख्दै आन्दोलनहरु उठिनै रहेको छ । जनु पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि जोडदार माग राखेकै छौं । तर, अब हामी शेर्पाहरुले कुन ठाउँमा आफ्नो प्रदेश खोज्ने, कुन क्षेत्र रोज्ने ? हाम्रो आवाजहरु कता हराए ? हामी बरालियौं ? सोच्ने बेला भएको छ ।’ उनले पहिचान र प्रदेशको विषयमा यसरी थप जोडे ‘हिजो जातिय मोर्चा बनाएर युद्ध जित्नेहरु आफ्नो स्वार्थपूरा भएपछि हामीलाई अलपत्र पारेर सत्तामा लिन भएका छन् । यीनको सत्ता लिप्साका कारणले हाम्रो मुद्दाहरु संकटमा परेको होकी भन्ने भान हुन्छ । तर, अहिलेपनि संघीय समाजवादी पार्टीले शेर्पा प्रदेशको मद्धालाई छोडेको छैन् । राज्यले जवरजस्त सात प्रदेशको रुपमा अघि बढाएपनि संविधान संशोधनमार्फत १० प्लस १ प्रदेशको रुपमा अघि बढाउने अडान कायम छ । त्यसो हुँदा मात्रै शेर्पा प्रदेश स्थापना गर्ने हाम्रो सपना पूरा हुन्छ । र, सबैले यसमार्गमा एकमता भएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।’ यसपछि उनले पहिचानका आधारमा नामकरण भएका भारतका असाम, वंगाल, तेलांगना राज्यको उदाहरण दिए । र, अन्तिम हदसम्म पहिचान र शेर्पा प्रदेशका लागि लड्न आह्वान गरे ।
संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता आङ काजी शेर्पा आफ्नो भनाई राखेपछि कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए । केही समयपछि सांसद आङ देण्डी शेर्पाको भनाइ राख्ने पालो आयो । उनले आफू कानको विरामी रहेको विषयबाट आफ्नो भनाई राखे । उनले शुरुमै आफ्नो कुरा सुनाउने तर अरुको नसुन्ने नेताहरुको संस्कार खराब रहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले घुमाउरो पारामा नेता आङ काजी शेर्पालाई नै प्रहार गरे । उनले फेरि भने आङ काजीलाई म मान्छु, उहाँ सिनियर नै हो तर ‘सिनियर भएर के गर्नु राजनीतिमा कसरी जम्प गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएपछि !’ फेरि आङकाजीतर्फ नै इंगित गर्दै सांसद शेर्पाले भने ‘नाक चुच्चो नै किन भन्नु पर्यो । आफ्नो मनभित्र राखेर काम गरे हुन्न ? कस्तो छुच्चो क्या !’
शेर्पा प्रदेश संघीय समाजवादी फोरमले उठाइरहेको र पहिचानको मुद्दा जिवित राखेको भन्ने विषयपनि सांसद शेर्पालाई पिटिक्कै चित्त बुझेको रहेन छ र जवाफ यसरी दिए । ‘शेर्पा प्रदेशको मुद्दा त हामी (तत्कालिन माओवादी) ले पो उठाएको हो त । उहाँहरुको नयाँ पार्टी गठन भएको त ३, ४ बर्षपनि भयो की भएन । यसरी हावा बोलेर हुन्छ ? शेर्पा मुक्ति मोर्चाले प्रदेश घोषणा गरेर अध्यक्ष (प्रचण्ड) लाई सल्लेरीमा लगेर बख्खु लगाएर कार्यक्रम गरेको हो की होइन ? शेर्पा मुक्ति मोर्चा १४ जिल्लामा अझैपनि संगठन छ । संघीयको त संगठनपनि छैन । अनि यस्तो अवस्थामा भ्रम फैलाएर हुन्छ ?’
शेर्पा प्रदेशको मुद्दालाई कसले जिवित राखेको भन्ने बिषयमा दुई नेताको भनाइले शेर्पाहरुवीच मुल विषयमा एकता नभएको प्रष्ट भएको कार्यक्रममा सहभागि अधिकांशले टिप्पणी गरे । ‘भाषा, संस्कृतीको संरक्षण र पहिचानको मुद्दामा नेतृत्व नै विवादमा देखिएपछि अब समुदायको भविष्य कता जान्छ भन्ने प्रष्टै छ ।’ एक सहभागिले दुःख व्यक्त गरे ।